ညီညွတ်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် NLD အောင်မြင်ဖို့ခဲယဉ်းမည်ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် ကယား ပြည်နယ် လွိုင်လင်လေးမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် လူ ၂ဝဝဝ ကျော်အား NLD ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာ ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား၌ ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရှေ့ဆက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အဓိကသော့ချက်ကညီညွတ်ရေးပါ။ ပထမဆုံးကကိုယ့်အချင်းချင်း၊ နောက် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်။နောက် မိတ်ဆွေပါတီတွေ၊ ဒီလို ညီညွတ်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ရင် အောင်မြင်ဖို့ခဲယဉ်းပါမယ်” ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှသည် ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ဦးတည်လှုပ်ရှားသည့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု မျိုးဖြစ်ရန်၊ ပြည်သူများနှင့်ထိတွေ့ မှုပြုလုပ်ရန် ၎င်းက ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ၂ဝ၂ဝ မှာ ၂ဝ၁၅ အလားတူအောင်မြင်အောင် အားလုံးကြိုးစားရမယ်။ အားလုံးကြိုးစားရမယ့်နေရာမှာ အဓိကအကျဆုံးက ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ဖို့။ ပါတီဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူလူထုနဲ့ အမြဲတမ်းထိတွေ့ရမယ်။ ထိတွေ့တာများလေ ကိုယ့်ချို့ယွင်းချက်ကို တွေ့မယ်။ ပြင်စရာတွေတွေ့မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မတွေ့ဘူး။ ပြည်သူလူထုလည်း မတွေ့ဘူးဆိုရင် ပြည်သူ့အသံကိုလည်းမသိ တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ ပြည်သူ့အသံလည်းမသိနဲ့ ကြိုးစားမှုတွေသဲထဲရေသွန် ဖြစ်မယ်”ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
ယခုအခမ်းအနားတွင် လွိုင်လင်လေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေး ရွာပေါင်း ၂ဝ ကျော်မှ ပြည်သူ ၂ဝဝဝ ကျော်အား ပါတီဝင်အဆို ပြုလွှာပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲသို့ NLD ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမေဝင်း မြင့်နှင့် ဦးအောင်စိုး၊ ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မုံရွာမြို့နယ် ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ် ရွေးချယ်ပွဲ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လူဟောင်းများ??
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်မှ အိမ်ရာ စီမံကိန်းများကို အိမ်ရာဘုတ်အဖွဲ့ တည်ထောင်ပြီး ဖော်ဆောင်ရောင်?
ရေနံချောင်း ရွာနှစ်ရွာပဋိပက္ခ တိုင်းဝန်ကြီးတစ်ဦး ပါဝင်သည့် စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ စစ်ဆေးမည်